“Pandinenge ndiri mukirasi ndichiteerera mudzidzisi wangu achitaura mashandiro anoita miviri yedu, ndinobva ndanyatsoona kuti zvechokwadi Mwari ariko. Nhengo imwe neimwe yomuviri wedu ine basa rainoita, kunyange kanhengo kadiki-diki kane basa rakanoita uye zvimwe zvinoitwa nomuviri wedu hatitombozvizivi. Magadzirirwo akaitwa muviri wemunhu anoshamisa chaizvo!”—Teresa.
“Pandinoona zvivako zvine nhurikidzwa dzakawanda, chikepe chihombe chinotakura vanhu, kana kuti motokari, ndinozvibvunza kuti, ‘Ndiani akazvigadzira?’ Zvinoda munhu akachenjera chaizvo kuti pagadzirwe mota nokuti ine tunhu tuduku twakawanda tunofanira kushanda zvakanaka kuti mota iyoyo ifambe. Kana paine munhu akagadzira mota zvinoreva kuti panewo akasika vanhu.”—Richard.
“Kana zvichitora makore akawanda kuti munhu ane pfungwa dzakapinza anzwisise zvinhu zvishoma-shoma nezvezvinhu zvakatiporedza, pfungwa yokuti zvinhu izvi zvakaita zvokushanduka-shanduka haina musoro!”—Karen.
“Pandairamba ndichidzidza sayenzi ndipo pandaiona kuti dzidziso yokuti vanhu vakatanga vari mhuka haisi yechokwadi. Somuenzaniso ndakafunga nezvezvinoitwa nevanhu pakugadzira zvinhu vachitevedzera zvinhu zvavanoona, kusiyana kwakaita vanhu nemhuka uye kuda kuziva kuti takabva kupi uye tiri kuendepi. Dzidziso yokuti vanhu vakatanga vari mhuka haikwanisi kutsanangura musiyano uripo pakati pemhuka nevanhu. Kana ndiri ini hangu ndinoona sokuti zvakaoma kuti ubvume kuti vanhu vakatanga vari mhuka pane kuti ubvume kuti Mwari ndiye akavasika.”—Anthony.
Vanhu vakasikwa vaine chido chokunamata. (Mateu 5:3) Chido ichi chinosanganisira kutenda kuti Mwari ariko. Saka kana mumwe munhu akati hakuna Mwari, iye ndiye anofanira kukutsanangurira kuti sei achifunga saizvozvo.—VaRoma 1:18-20.
^ ndima 32 Kwakatorwa mashoko: Sangano reSocial Science Research Council, mugwaro rakaitwa naElaine Howard Ecklund, February 5, 2007 rinonzi “Religion and SpiritualityAmong University Scientists.”